खानासँग जोडिएका मनोसामाजिक पक्षहरू - जीवन शैली - प्रकाशितः असार २९, २०७५ - नारी
आफ्नो संस्कृति, उमेर, चाहना एवं आवश्यकताअनुरूपको खाना खान पाउँदा सबैले आफूलाई भाग्यमानी मान्छन् । सन् १९४१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रुजभेल्टले पहिलोपटक भोकमरीबाट मुक्त हुन पाउनु मानवको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर खानामाथिको अधिकारको अवधारणा अघि सारेका थिए । यो अवधारणालाई सन् १९४८ मा जारी गरिएको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २५ मा सशक्त रूपमा स्थापित गरियो । यसरी नै खानामाथिको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।
नेपाल विविध जात–जाति, धर्म–संस्कृति एवं जैविक विविधता भएको देश हो । त्यसै अनुरूप सबैलाई खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक उत्पादनका स्रोत र सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियासँग आबद्ध प्रक्रिया र मनोसामाजिक पक्ष बुझ्नु अत्यावश्यक छ ।
खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रतिपादन गरेको मार्गनिर्देशनअनुरूप खानामाथिको अधिकार स्थापित गर्न तीन प्रमुख स्तम्भ आवश्यक हुन्छ । क) खानामाथिको अधिकारलाई आदर गर्नु, ख) संरक्षण गर्नु तथा ग) परिपूर्ति गर्नु । संवैधानिक एवं आवश्यक नीति–नियमपूर्वक खानामाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुलाई राज्यले यस्तो अधिकारप्रति आदर गर्नु भन्ने बुझाउँछ । यसरी उत्पादक र उपभोक्तालाई उत्पादनको स्रोत–साधनमाथि पहुँच सुनिश्चित गराउने र अनियन्त्रित बजारबाट उपभोक्तालाई जोगाउने काम खाद्य संरक्षणको प्रमुख पाटो हो । त्यसैगरी बालबालिका, अशक्त, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य कारणले विस्थापितहरूलाई खाद्य परिपूर्तिको जिम्मा राज्यको दायित्वमा पर्छ ।
नेपाली समाजमा घरपरिवारको भान्सा व्यवस्थापनको जिम्मा विशेषत: महिलामा हुन्छ । त्यसका लागि कुन छाकमा के पकाउने, कसले के खान रुचाउँछन्, कहाँ पाइन्छ, कहिले किन्ने, कुन तरिकाले पकाउने, कसरी पस्किने सबैमा त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ, जुन भान्सा जिम्मा लिने व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक तयारीमा भर पर्छ तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, घरमा रहेका विभिन्न उमेर, स्वास्थ्य अवस्था एवं चाहनाअनुरूपको खाना तयार गर्ने कामलाई एकदमै सामान्य कामका रूपमा लिइन्छ । खाना हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पाटो हो । सामान्य बोलीचालीमा पनि ‘खाना खायौ भन्दा पनि भात खायौ ?’ भनिन्छ । सुन्दा सामान्य लाग्छ तर चामल किन्ने सामथ्र्य नभएकाहरूका लागि र मकै, कोदो मुख्य खाना हुने समुदाय वा रोटी खाने चलन भएकाहरूका लागि लादिएको भाषा वा होच्याइएको अर्थ लाग्न सक्छ भन्ने कुराको ख्याल गरिँदैन । त्यसैले खानाको माध्यमबाट विविधताको ख्याल गर्न, आदर गर्न एवं स्वीकार्यता देखाउन सचेत हुनुपर्छ ।
खाना शक्ति सम्बन्ध परिभाषित गर्ने माध्यम पनि हो । उदाहरणका लागि घरमा पाहुना बोलाउँदा विशेष गरी कुटुम्ब तथा शक्तिमा आसीन व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरमा खाना खान बोलाएर सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै पाइन्छ । साथीभाइहरू भेला भएर खाना खानु अनि त्यही बहानामा आपसी सम्बन्धलाई दिगो बनाउनु एउटा राम्रो प्रक्रिया पनि हो तसर्थ खाना एउटा यस्तो माध्यम हो, जसले शक्ति सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न, मजबुत बनाउन तथा टिकाइराख्न कुनै न कुनै तरिकाले मद्दत गर्छ ।
यसैगरी खाना हाम्रो संस्कार पनि हो । प्रत्येक जातजातिले आफ्नो धर्म, रीतिरिवाजअनुसार खाना खान्छन्, आफ्ना पितृलाई चढाउँछन्, आफ्ना आराध्यदेवहरूको पूजा गर्छन् । यसरी तयार गरिने खानाप्रति समाजका अन्य समुदायले नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरिदिँदा आपसमा चित्त दुखाइ मात्र होइन मनमुटाव र झैझगडासम्म हुन सक्छ । एक व्यक्ति वा समुदायले अर्को व्यक्ति वा समुदायप्रति होच्याउने मनसायले गरिने यस्ता टीकाटिप्पणीले गर्दा उनीहरूले पनि आफूप्रति श्रद्धा आर्जन गर्न सक्दैनन् । हाम्रो जस्तो विविध जातजाति र समुदाय मिलेर बसेको समाजमा खानासँग जोडिएको मनोसामाजिक पक्षको विशेष
समाजमा पहिलेदेखि नै चलनचल्तीमा रहेको सेवाभावले प्रेरित दु:खीलाई खाना ख्वाउने चलन अहिले संगठित र विविध रूपमा देख्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा विभिन्न आश्रम तथा स्याहार गृहमा खाना ख्वाउने चलन बढेको छ । यस्ता केन्द्रहरूमा यसै पनि परित्यक्त तथा सहाराविहीनहरू पुग्छन्, जुन कसैको पनि चाहना हँुदैन । यस्ता केन्द्रहरूमा प्रदान गरिने खानाका बारेमा व्यवस्थापनकर्मीहरूसँग छलफल गर्ने, मिलेसम्म आश्रितहरूसँग बसेर खाना खाइदिने, खाना दिँदा सम्मान प्रकट गर्ने व्यवहारले विशेष महत्व राख्छन् । खाना दिनु मात्र त दान हो, जसमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, तर खाना बाँडेर खानु सुख–दु:ख साटासाट गर्नु हो ।
समाजमा व्याप्त चालचलन
 चैत २४–२९, २०७४ मा कर्णाली प्रदेशको भ्रमणका क्रममा मुगुका केही स्थानीय बासिन्दासँग कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो । मैले हामी कोदाको पिठोको खोलेमा हरियो लसुनको पात, अदुवा, नुन–मसला तथा भटमास हालेर खान्छौं । यसरी खाँदा झोलिलो तथा स्वादिलो हुनुका साथै पोषणको हिसाबले पनि राम्रो हुने कुरा गरे । उनीहरूले त्यतातिर पिठोको रोटी नै खाने र अलि रुखासुख्खा खाने चलन भएको बताए । स्थानीय बासिन्दाहरूले भने–यतातिर खोले बनाएर खाए, पिठो थोरै भएर खोले बनाएर भाग पुर्‍याए, खान नपुग्ने परिवार भनेर होच्याउँछन् भन्ने डरले सबैले सुक्खा भए पनि रोटी नै खान्छन् ।
 २०७५ को वैशाख १ गते रारा महोत्सवमा आउने अतिथिहरूको खानामा स्थानीय उत्पादनकै परिकार बनाउने तय गरिएको थियो । त्यसका लागि स्थानीय चामल, कागुनो, चिनो, फापर, सिमी आदिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने खाना यस्तो माध्यम हो, जसले स्थानीय पहिचान, सम्भावना र स्रोतको परिचय दिन्छ । यसैगरी स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि गाउँठाउँमा हुने बालीबाट खानाको विविधीकरण गर्न सकिने, स्थानीय खाना खाँदा हेय भाव लिनु नपर्ने र खानालाई पर्यटनसँग जोडेर व्यवसाय गर्न सकिने सम्भावनालाई उजागर गर्छ ।
 विशेषत: नेपालको पश्चिमी भेगमा व्याप्त महिनावारीको समयमा गरिने विभेदले मनोवैज्ञानिक रूपमा कति असर गरेको छ, त्यसको आँकलन गर्न सकिएको छैन । महिलाको जीवनचक्रमा महत्वपूर्ण समयमा फोहोरी हँुदा फोहोरी काम नै गर्ने मनसायले खेतबारीमा पठाइनु र रुखासुख्खा मात्र खान दिँदा उनको मनोभाव कस्तो होला ? किन, कसले र केका लागि यो विभेद भैरहेको छ ? विशेष अवस्थामा पोषिलो खान पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन् किन भैरहेको छ ?
 बाटोको छेउमा ६० रुपैंयाँ प्रतिकिलोमा घिरौला बेचिरहेकी एक महिला र घिरौला खान मन गर्ने वृद्धाको कुराकानी सुनें । वृद्धाको चाहना रहेछ, ज्वरोले थलिएर उठेपछि घिरौला खाने मन भयो, मागेको दिएन । बिक्री गर्ने महिलाको भनाइ थियो, मैले पनि खरिद गरेर ल्याएको सित्तैमा दिएपछि मैले के खाने ? मैले एक किलो किनेर वृद्धालाई दिएँ । यसले के देखाउँछ भने असहाय व्यक्तिहरूले सामान्य घिरौलासम्म खाने हैसियत राख्दैनन् भने पूर्णरूपले सन्तुष्ट हुने गरी पोषिलो खाना खान पाउने अधिकार कहाँ गयो ? त्यतिबेला ती वृद्धा कुन मनोभावमा थिइन् भनेर कल्पना गर्नु पनि पीडादायी छ ।
 खानाको वर्ग पनि हुन्छ तर त्यसको परिभाषा समय र परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ । गाउँमा मकैको च्याँख्ला करले खानेहरूको हैसियतलाई सहरमा बसेर रहरले खानेसँग दाँजेर हेरिन्छ जुन कदापि न्यायिक हुन सक्दैन ।
 खाना खाने मात्र होइन, आफ्नो नजिककाहरूप्रति श्रद्धाभाव देखाउने माध्यम पनि हो । आमाबुवाको मुख हेर्ने दिन होस् वा अन्य चाडबाड, आफ्नाले मन पराउने खाना लिएर भेट्न जाने चलन अझै पनि छँदैछ । यद्यपि मीठो ख्वाउने नाममा कर गरेर ख्वाउनु आफैमा गलत प्रवृत्ति हो । डा. भरत रावतका अनुसार सासूले मान गर्ने नाममा ज्वार्इंलाई जबरजस्ती चाहिनेभन्दा बढी ख्वाउने चलन ठीक होइन ।
 खानाको गुणस्तर र क्रय शक्ति एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । अहिले सहरबासीहरूमा स्वास्थ्यप्रतिको चेतना बढेको पाइन्छ, जसले गर्दा खाने कुरासम्बन्धी रोजाइ पनि बदलिँदो क्रममा छ । यद्यपि ताजा र हरियो तरकारी, रेसादार अनाज किन्नु उच्च–मध्यम वर्गका लागि मात्र सम्भव छ । अर्कातर्फ श्रमजीवी मजदुर वर्ग, जसले शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले मासु–भात खाँदा शक्ति आओस् भन्ने नाममा दाल, तरकारी नखाने प्रवृत्तिले के असर पारेको छ, लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ के खाइँदैछ, किन खाइँदैछ भन्ने जानकारी माथिको अधिकार सुनिश्चित हुनु अत्यावश्यक छ ।
 खाना सशक्तीकरणको एउटा पाटो हो । पहिले–पहिले दुईथरी तरकारी पकाउँदा फारू गर्न नजान्ने संज्ञा पाएका बुहारीहरू अहिले सासूले किन दुईथरी तरकारी नपकाएको भन्दा मख्ख हुने अवस्था पनि पुगेका छन् । आफ्नै घर–बगैंचामा विविध खालका पोषणयुक्त तरकारी खेती गर्ने परिवारहरूमा आएको परिवर्तन हो यो । आफ्नै पहुँच र निर्णयभित्र के पकाउने, कति पकाउने र के खाने भन्ने कुरा भान्सा व्यवस्थापकको पकडमा हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने आत्मसन्तुष्टि वर्णन गरेर साध्य हुँदैन । त्यसैले खाना भनेको आत्मसम्मान, सशक्तीकरण, पहिचान र सह–अस्तित्वको माध्यम हो भन्ने तथ्यलाई मनन् गर्न जरुरी छ ।
-कृषि खाद्य सुरक्षा तथा लैंगिक विश्लेषक